Injongo Inyaniso: Ngaba Izinto Zinyaniso Kungakhathaliseki Ukukholelwa?
Ngaba Kukho Okunyanisekileyo Kungakhathaliseki Oko Sikholelwayo?
Umbono wenyaniso njengenjongo nje kukuba kungakhathaliseki ukuba siyintoni na ukuba siyintoni na, ezinye izinto ziya kuhlala ziyenye kwaye ezinye izinto ziya kuhlala zibuxoki. Iinkolelo zethu, nokuba ziphi na zona, azibandakanyeki kwiinyani zehlabathi ezisijikelezayo. Into enyanisweni ihlala iyinyaniso-nokuba siyeka ukuyikholelwa kwaye nangona siyeka ukukho konke.
Ngubani Okholelwa Ngenyaniso Injongo?
Uninzi lwabantu kwiimeko ezininzi ngokuqinisekileyo zenza ngokungathi zikholelwa ukuba inyaniso iinjongo, ezizimeleyo zabo, iinkolelo zabo kunye nokusebenza kwengqondo zabo.
Abantu bacinga ukuba iingubo ziya kuhlala zihlala kwikhedi yabo ekuseni, nangona bayeke ukucinga ngabo ngabo busuku. Abantu bacinga ukuba izitshixo zabo zingaba sekhitshini, nangona bengenakho ukukholelwa oko kwaye endaweni yoko bakholelwa ukuba izitshixo zabo zisegumbini.
Kutheni Abantu Bakholelwa KwiNyaniso Yenjongo?
Kutheni sifanele sithathe isikhundla esinjalo? Eyona nto, amaninzi ethu amava aya kubonakala eqinisekisile. Sifumana iimpahla kwikhefu ekuseni. Ngamanye amaxesha izihluthulelo zethu ziphelela ekhitshini, kungekhona kwindlovu njengoko sasicinga. Nomaphi esiya khona, izinto zenzeka kungakhathaliseki oko sikholelwayo. Akukho kubonakala ngathi kukho ubungqina bokwenene bezinto ezenzekayo kuba nje sifuna ukuba nzima. Ukuba ngaba kunjalo, ihlabathi liza kuba lidaka kwaye lingalindelekanga kuba bonke abantu babeya kuthanda izinto ezahlukeneyo.
Umcimbi wokubikezela ubalulekile, kwaye ngenxa yeso sizathu uphando lwezenzululwazi lubandakanya ubukho beenjongo ezizimeleyo.
Kwizenzululwazi, ukugqiba ukuqinisekiswa kweengcamango kufezekiswa ngokwenza izibikezelo uze uqikelele iimvavanyo ukuze ubone ukuba ezo ziprofeto ziyazaliseka. Ukuba bayenzayo, ngoko i-theory izuza inkxaso; kodwa ukuba ayenjalo, ngoko i-theory ibonisa ubungqina ngokuchasene nayo.
Le nkqubo incike kwimigaqo yokuba iimvavanyo ziya kuphumelela okanye ziphumelele kungakhathaliseki ukuba ngabaphandi bakholelwa ntoni.
Ukucinga ukuba iimvavanyo zenzelwe kwaye zenziwe ngokufanelekileyo, akunandaba ukuba baninzi abachaphazelekayo bakholelwa ukuba kuya kusebenza - kukho ukuhlala kunokwenzeka ukuba kunokuba iphumelele. Ukuba le nto yayingekho, ngoko bekungekho nto ekufuneka iqhube iimvavanyo, ngaba bekuya kuba khona? Naluphi na umntu owakhuphayo uya kuba "okwenyaniso" kwaye oko bekuya kuba kukuphela kwayo.
Kucacile, oko kukuthetha kakubi. Ihlabathi alinakukwazi ukusebenza njengaloo - ukuba lenze, asiyi kukwazi ukusebenza kuyo. Yonke into esenzayo incike kwiingcamango zokuba kukho izinto ezichanekileyo kunye nokuzimela ngokuzimela - ngoko, inyaniso, kufuneka ukuba inenjongo. Kunene?
Nangona kukho ezinye izizathu ezintle nezichukumisayo zokucinga ukuba inyaniso inenjongo, ngaba yanele ngokwaneleyo ukuba sithi siyayazi ukuba inyaniso inenjongo? Kungenzeka ukuba ungo-pragmatist, kodwa kungekhona wonke umntu. Ngoko kufuneka sibuze malunga nokuba izigqibo zethu apha ziyasebenza emva koko konke-kwaye kubonakala ngathi zikhona izizathu zokungabaza. Ezi zizathu zanikezela kwifilosofi ye-Skepticism kwiGrike yamandulo . Olunye uluvo lwefilosofi kunokuba, isikolo sokucinga, luqhubeka luba nefuthe elikhulu kwifilosofi namhlanje.
Ukukhutshwa kweRhafu noMsebenzi wezoPolitiko weCawa
Iinkolo Zithathu, Oyedwa UThixo? UbuYuda, ukuchithwa, kunye ne-Islam
Iintsapho ezili-10 eziphambili ze-Beetle eMntla Melika
Izilungiso zobuntu obushushu
Hlola iSombrero Galaxy
Imbali yoKhutshwa koBanzi
Isikhokelo esisisiseko soTitshala sokwenza iNgcaciso